Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Las Vegas fizahan-tany sahirana aorian'ny fitifirana be?
Fitifirana olona mahafaty sy fizahan-tany any Las Vegas - misy ny vokany sy ny fanamby sasany. Forwardkey dia manadihady ny vokany voalohany amin'ny indostrian'ny Visitor Las Vegas.
Sahirana ve ny fizahantany any Las Vegas? Mazava ho azy fa aorian'ny fitifirana mamono olona be indrindra ao Sin City dia andrasana ny fanamby sasany ary tena misy izy ireo, saingy mety tsy ho eo akaiky eo ny olana lehibe. Miorina tsara ny indostrian'ny mpitsidika any Las Vegas.
Ny fitifirana vahoaka mahatsiravina nitranga tamin'ny 1st Oktobra tao Las Vegas rehefa nitifitra ireo mpijery kaonseritra tao amin'ny efitranony 32 i Stephen Paddocknd ny gorodon'ny hotely Mandalay Bay dia niteraka fihemorana tamin'ny famandrihana sidina mankany Las Vegas. Ny fandinihana dia avy amin'ny ForwardKeys, amin'ny alàlan'ny famakafakana manodidina ny 17 tapitrisa ny fifanakalozana famandrihana sidina isan'andro.
Tao anatin'ny valo herinandro talohan'ilay loza dia efa nidina 7% ny famandrihana an'habakabaka ho an'ny Las Vegas tamin'ny vanim-potoana nitoviana tamin'ny taona lasa, raha 2% kosa ny famandrihana iraisam-pirenena. Tao anatin'ny telo herinandro taorian'ny tranga mahatsiravina tamin'ny 1 Oktobrast, nirodana ny famandrihana; Ny famandrihan-toerana momba ny sidina dia nidina 21% ary ny famandrihana iraisam-pirenena dia nilatsaka 16%, raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2016.
Ny famakafakana ny tsena fiaingana dia mampiseho fiovana ratsy eo anelanelan'ny 13% sy 27% manerana ny solaitrabe. Ny fidinana an-trano faran'izay ratsy indrindra dia ny famandrihana avy any San Francisco sy New York. Tao anatin'ny valo herinandro talohan'ilay loza dia 6% no nidina ary 3% no nidina tsirairay avy; tao anatin'ny telo herinandro, 33% no ambany ary 29% no ambany. Amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny fihenam-bidy indrindra dia ny famandrihana avy any Azia Pasifika, izay 10% no talohan'ny famonoana ary nianjera hatramin'ny 10% taorian'io. Ny famandrihana avy any Moyen Orient dia efa nidina 26% ary nianjera hatramin'ny 41% izy ireo, nampitovina tamin'ny fe-potoana mitovy amin'ny 2016.
Mikasa mialoha ny enim-bolana manaraka, ny famandrihana ho an'ny sidina mankany Las Vegas manomboka amin'ny 1st Novambra hatramin'ny 30th Aprily, dia ao ambadiky ny toerana nisy azy ireo tamin'ity taona ity. Talohan'ny loza dia nihazakazaka 10% ny famandrihana anatiny; ankehitriny 14% no ao ambadik'izy ireo. Ny famandrihana iraisam-pirenena alohan'ny loza dia 1% mialoha; 2% ao aorian'izy ireo izao. Saika ny tsenan'ny loharanom-baovao rehetra, afa-tsy Aostralia sy Brezila, dia nihena ny famandrihana ho an'i Las Vegas.
Olivier Jager, CEO, ForwardKeys dia nilaza hoe: "Ny fijerena ny zava-misy ankehitriny, dia mahatsapa fiaraha-miory fotsiny. Mampivarahontsana sy mampivarahontsana tanteraka ny zava-nitranga tamin'ireo niharan'ilay fitifirana. Ny iray ihany koa dia malahelo amin'ireo olona rehetra miasa any Las Vegas koa, izy ireo dia nanolo-tena haneho fotoana tsara amin'ny mpitsidika ary tsy maintsy ho sarotra be ny manohy manao an'izany amin'ny toe-javatra mahatsiravina toy izany. Na eo aza izany, na dia niverina aza ny famandrihana mandritra ny enim-bolana ho avy; tsy fahatokisana fa hijanona ny tsena. Raha miakatra ny toekarena amerikana; raha tsy misy tranga mitovy amin'izany ary raha misy ny fampielezan-kevitra mampihetsi-po ataon'i Las Vegas, dia azo atao tsara ny mamadika izany. "
Hong Kong - Maldives: tsy mijanona amin'ny seranam-piaramanidina Hong Kong